Fisintonana antsokosoko ny mombamomba ny olona amin’ny Gmail any Tunisia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2010 4:06 GMT
Vao haingana ireo mpampiasa aterineto any Tonizia no nanomboka nitaraina momba ireo olana amin'ny fidirana amin'ny kaonty Gmail, ary nanomboka niparitaka ireo tsaho momba ny fisian'ny sivana amin'ny tolotra mailaka an'ny Google. Nanomboka tamin'ny nisian'ny andiana sivana vaovao izay nanakanana ireo vohikala malaza toa an-dry Flickr, Wat.tv, Blip.tv, Metacafe.com, Agoravox.fr ary blaogy Toniziana maro tsy voatanisa, nitombo ny tahotra sivana amin'ny aterineto ary toa voamarina izany.
Tamin'ny herinandro lasa teo, olona roa arahiko amin'ny twitter no nitatitra fampitandremana momba ireo fisintonana an-tsokosoko ny filazalazana manokana, miaraka amin'ireo sary mampiseho fa ny fidirana amin'ny mail.google.com dia manome hafatra tsy fetezana hafahafa avy amin'ny EasyPHP.
Tena mahery tokoa EasyPHP, nefa tsy misy fomba ahafahany mampiantrano tolotra toa an'i Gmail. Mazava ho azy fa pejy hosoka fidirana Gmail iny, namboarin'ireo mpijirika toa tsy mahay mikirakira tsara ny EasyPHP, ary manao ny asany manerana ny tambajotran'ny aterineto any Tonizia.
Raha ny misy ny dingam-pikarohako amin'izao, ny eritreritro dia ny hoe iny zava-nitranga iny dia fanafihana fanapoizinana “DNS cache”, fomba natao hamitahana ireo mpampiantrano DNS (izay tompon'andraikitra amin'ny fandikàna ireo anarana toy ny mail.google.com ho rohy amin'ny aterineto), ary mandefa ny mpampiasa te-hiditra amin'ny vohikala iray ho any amin'ny iray hafa. Ny nahatonga ahy amin'izany tsoa-kevitra izany dia ny tsy nahavoa ahy tamin'io fanafihana io, noho izaho tsy nampiasa ny DNS-n'ny ISP-ko. Nefa hitako ankehitriny fa mbola ratsy noho izany ny zava-misy.
Andro vitsivitsy taty aoriana, raha nanandrana niditra Gmail aho – ny Gmail-ko dia namboariko tsy hampiasa afa-tsy ny https – nandà ny hidirako ny fitetialako.
Ny fomba fijirihana tamin'ny voalohany dia ny hanakana ny fidirana amin'ny Gmail tsara aro mba tsy maintsy hidiran'ireo Toniziana amin'ny fandalovany amin'ny Gmail tsy voaaro, dia mandrebireby azy ireo amin'ny solosaina manokatra pejy fidirana Gmail hosoka ao amin'ny EasyPHP, mba hangalarana ny tenimiafin-dry zareo ary rehefa avy eo, mijirika ireo kaonty mailaka, raha ilaina izany.
- ny tokony hatao voalohany dia ny fampiasàna ny “Mampiasa https foana.” any amin'ny fandrindràna ny Gmail-nao.